Ambassador Cawaale Kullane oo ka qeybgalay kulan looga hadlayay qaabka warbaahinta caalamku u tabiso arrimaha Soomaaliya |
Ambassador Cawaale Kullane oo ka qeybgalay kulan looga hadlayay qaabka warbaahinta caalamku u tabiso arrimaha Soomaaliya
September 13, 2015 Cawaale Cali Kullane oo ah Alternate Ambassador-ka Qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyay kulan sanadle ah oo ay soo qaban qaabiyeen Jaamacadda Rutgers University of School of Public Affairs (SPAA) iyo Dr. Uchenna Ekwo oo ah madaxweynaha Xarunta Warbaahinta iyo Nabadda.
Kulankan ayaa waxaa si gaar ah diirada loogu saaray (Qaabka warbaahinta caalamku u tabiso uga hadasho arrimaha Dalka Soomaaliya), How the World Media Covers Somalia.
Ambassador Cawaale Kullane oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay qaabka ay warbaahinta caalamku u soo tabiso arrimaha Soomaaliya, wuxuuna xusay in warbixin yar oo aanan ka tarjumeynin sifaha rasmiga ah ee dalka ay ka soo tabiyaan, isla markaana dadweynaha caalamka u tusay in Soomaaliya ay tahay meel uu ka socdo dagaal, Afduub, iyo qas, isaga oo xusay in dalku haatan uu marayo marxalad wanaagsan, soona kabanayo.
“Warbaahinta caalamku waxay buun buuniyaan marka ay ka hadlayaan dalka Soomaaliya, caqabaddaha iyo dib u dhacyada oo kaliya, balse ma tabiyaan horumarada dowladda, horumarka ganacsiga, iyo sida dalku uga soo kabanayo dagaaladii iyo fowdadii” ayuu yiri Amb. Cawaale oo xusay in dadka Soomaaliyeed oo kaashanaya beesha caalamka ay ku talaabsatay dowlad wanaag iyo Dumuqraadiyad.
Kulankan sanadlaha ah ee Jaamacadda (SPAA) ayaa diirada lagu saaraa sida warbaahintu udub dhexaad ugu tahay horumarinta Dimuqraadiyadda caalamka, saameyn weyna ay ku leedahay siyaasadda dalalka soo koraya iyo kuwa horumaray. Waxaana la unkay sanadkii 2011-kii.